Tweaks inoenderana neIOS 9 (II) | IPhone nhau
Angori maawa makumi maviri nemana mushure mekutanga kweJailbreak nyowani yeIOS 24, vatove zvinopfuura zana neshanu tweaks dzakagadziridzwa kuIOS 180 uye kuti tinogona kuisa uye kunakidzwa pane edu zvishandiso neJailbreak. Mune inotevera runyorwa unogona kuwana ese ma tweaks ayo izvozvi anoenderana neIOS 9 pamwe neinoenderana vhezheni. Kana paine chimwe chezve tweaks chauri kutsvaga chisiri mune rondedzero, iwe unongofanirwa kumirira yavo yekuvandudza, nekuti kuyedza kuisa tweak isina kuvandudzwa kuIOS 9, ingangoita kuti mudziyo wedu utangezve muchiuno.
20 Yechipiri Lockscreen 1.2.6
Apple Faira Rukoti «2» 1.2
AppSync Yakabatana 5.6-1
Mubatsiri + 1.2.0-1
AutoTouch yeIOS 8 3.5.2
Percentage Battery 1.0-1
Kudzoreredza mameseji 1.1
CCPinfo yeControl Center 1.1.2-7
RuvaraFlow 2 1.0.1-1
Zuva Nezuva 1
Zuva mune Statusbar 0.9.1-2
Dhisiki Pie 1.2
Flat manotsi 1.0-10
Minimal Mauto Anodzivirira 7.0-1
Zvishoma HUD 1.2-1
Hapana Percent Sign 1.5-1
Zvicherechedze iwe pachako 1.1-1
Pasuru Yekuvandudza Notifier 1.1.0
Phantom yeSnapchat 4.5.2-1
Mufananidzo Murongi 8 1.6-1
Simba Saver Mode 0.0.1-75
Chinonyanya kukosha Hub 1.5.1
Bvisa Mabheji 1.6-2
Dzokera Kuna Sender 1.2-22
Mamiriro ezvinhuHUD 2
SwipeSelection (Yemahara uye Pro) 1.0.2-3
TetherMe yeIOS 8+
kuchonya 0.9 ~ beta6-1
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Tweaks inoenderana neIOS 9 (II)
Uye iyo VirtualHome? 🙁
Isu tinofanirwa here kudya tweak kana chimwe chinhu kuita kuti iro spotify rishande mune yayo yekutanga vhezheni hehe mune ios 9 hapana kusvika ikozvino?
Pindura kuna 23kie
Asi chiripo here?
Jean carlo akadaro
Ndinodawo kuziva ... Ndinovimba mumwe munhu aizoedza bdayspotify semuenzaniso kuti aone kuti zvinoshanda sei
Pindura kuna Jean Carlo
haishande muna 9.xx
Pindura kuna akaju
Manuel Tizon Calderon akadaro
Bdayspotify Kana ichishanda pane iphone 5 poro pane yemukadzi wangu 5s kwete, ndinofunga ine chekuita neiyo 64bit chip asi usanyanye kunditeerera
Pindura kuna Manuel Tizon Calderon
Auxo 3 haishande. Chero repon yakasimbiswa?
Ichokwadi, Auxo 3 hapana kana chinhu. Ngatione kana vachigadzirisa izvo munguva pfupi, izvo pamwe neActivator zvakakosha!
Pindura kuti doop
Tsamba yacho inoti iFile inoshanda asi yazvino vhezheni (2.2.0-1) haina kutsigirwa, izvi zvinoshanda zvakanaka.
Dzinga Kamera Grabber 1.0.3
Rongedza Maaramu 1.1.1
Yakavakirwa Mafolda 1.1.1-1
Ndakaiyedza maminetsi mashoma apfuura uye hapana, kunyangwe hafu inoshanda
ifile inoshanda nemazvo senge filza maneja Kwaziso
iMU, kutaura kwacho kwaive kupindura kuna Jimmy uyo akabvunza nezve iyo chaiyo imba chete kuti nekukanganisa handina kumupindura mumashoko acho pachawo haha, Filza akandipa dambudziko rakafanana asi rakatoiswa, handina kuyedza iFile futi, nezuro pakanga pasina nzira yekuita kuti ishande.
Icaught pro haigone kuisirwa nekuti haibvumire iwe kuve neIOS 9 yakaiswa, nei vachizviisa senge zvinoenderana?
Iyo yandinoda zvakanyanya haina kumbobuda, pane chero munhu anoziva kana Whatspad ichienderana? Ini handikwanise kuisa ipad uye kubuda muWhatsApp, zvinosuwisa kuti makore apfuura tinoenderera seizvi uye hazvigone kuiswa ipad senge chero imwe app
Mune iyo Beta vhezheni yeA Activator, nekukurumidza kana iwe ukaedza kupa iyo Multitask sarudzo kune chero chiito, Safe Mode iyo yakakusimudza. Screen kubatwa uye Yekutanga Bhatani simulation inoshanda zvakakwana. Iyo yekurara Bhatani simulation sarudzo haishande kana… ..
Chero tweak kutenderedza iro rese screen / interface senge iri muplus inoenderana ne ios 6 ??? Ndatenda
Pindura kuna Rodriciones
Christian manuel akadaro
Pane chero munhu akaedza iyo tweak pane iyo iPhone 6s kana 6s +
Pindura kuna Christian Manuel
Ricardo Sanchez akadaro
WinterBoard inoshanda kubva kuCydia kana iwe unofanirwa kurodha pasi iro faira sekutaura kwavo nguva pfupi yadarika
Pindura Ricardo Sanchez
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA CALI akadaro
whatspad inoshanda 100%
Pindura kune INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA CALI
sp kubata uye rakapotsa bhatani, vane matambudziko ayo kana achishanda iri vhome
Pindura kune sexclow1
Imba Yechokwadi inoshanda zvakakwana ...
Ndeapi masororo ari kushanda?
Chiremba Artvr akadaro
Iwe unoziva here kana wachi yekutarisa kana izhizha ripi rinoenderana neios9?
Uye imwe tweek yekumisikidza iyo yakavharwa skrini nekaviri tap (kwete kushandisa bhatani remagetsi) ??
Pindura Dr. Arvvr
Ndakaedza ese mabhaisikopo uye hapana kana rimwe rawo rakashanda, pane chero munhu anoziva kana vachizogadziridza?
Nicola Pretto akadaro
spotify xploit unlimites inoshanda pane ipad
Pindura kuna Nicola Pretto